Puntland oo Shuruudo aad u adag oo qaarkood lala yaabay ku xirtay in ay aqbasho Nidaamka 4.5 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 30 March 2016
Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa wali ku sugan magaalada Garawe , waxa ayna halkaasi kulamo kala duwan kula qaateen Madaxda Maamulka Puntland ay ka dhaa dhicinayeen sidii ay u aqbali lahaayeen in Doorashada soo socota lagu saleeyo nidaamka 4.5.
Kulamada Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya la lahaa Madaxweyne Gaas iyo Madaxda kale ee maamulka Puntland ayaa wali wax natiijo ah kasoo bixin, Puntland ayaana wali ku adkeesaneysa in ay kasoo horjeedo nidamaka 4.5 in lagu soo dhiso Dowlada soo socota.
Wararka aan ka heleyno Madaxtooyada Garawe ayaa sheegaya in Madaxda Puntland ay shuruudo adag ku xireen Raisul Wasaaraha Soomaaliya si ay u ogolaadaan in uu shaqeeyo Nidaamka qabiilka ku dhisan ee 4.5.
Puntland ayaa Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya ku xirtay Shuruud ah in ay aqbalayaan nidaamka 4.5 in lagu soo doorto Baarlamaanka Soomaaliya hadii kulamada Baarlamaanka laga wareejiyo Muqdisho loona wareejiyo Garawe ama Kismaayo.
Shuruudan cusub ee Puntland hordhigeen Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha la socda ayaa u muuqata mid Puntlnad ay wali ku diidan tahay in ay aqbasho nidaamka 4.5, waxaana Shuruudan Puntland keentay layaab ku tilmaamay R/Wasaaraha iyo masuuliyiinta kale ee wehlisa.
Kulamada ay leeyihiin Madaxda Puntland iyo wafdiga R/Wasaaraha Soomaaliya ayaa ah wali kuwa socda, waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan kulamadan oo socday mudo afar maalin ah in war laga soo saaro.
Maamulada dalka ka jira sida Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa ogolaaday in Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya lagu soo xulo Nidaamka Qabiilka ee 4.5. waxaana nidaamkan kasoo horjeeda Puntland oo iyana dooneysa in qaab deegaan doorashada lagu saleeyo.